တွေ့မိမှတ်မိသမျှ: April 2007
သင်္ကြန်ပွဲတော်၊ မြန်မာနှစ်၏ အဦးဆုံးလမိဿရာသီဟုအမည်တွင်သော တန်ခူးလကား၊ နှစ်ဟောင်းကိုခြွေ နှစ်သစ်ကိုစေသော နွေ၏ အုတ်မြစ်ဖြစ်ပေသည်။ တန်ခူးသည် 'တန်' နှင့် 'ခူး' ကိုပေါင်းကာ တန်ခူးဖြစ်လာသည်ဟူ၏။ 'တန်' သည် ပါဠိဘာသာဖြင့် 'ကာလ' ဟူသော စကားမှဆင်းသက်လာကာ 'ထန်း' ဟု အနက်ရ၏။ 'ခူး' သည် ခူးဆွတ်သည်ဟု အနက်ထွက်သဖြင့် ဤလရာသီတွင် ထန်းသီးများ ဆွတ်ခူးလေ့ရှိသောကြောင့် တန်ခူးလဟုခေါ်တွင်ကြောင်း အချို့ကယူဆကြ၏။ အချို့ကမူ တန်ခူးသည် 'တာကူး' မှ ဆင်းသက်လာသည်ဟု ဆိုကြပြန်သည်။ 'တာ' သည် အချိန်ရာသီဟု အနက်ထွက်ကာ 'ကူး' မှာ ကူးပြောင်းဟု အဓိပ္ပာယ်ရ၏။ တနင်္ဂနွေဂြိုလ်သည် မိန်ရာသီမှ မိဿရာသီသို့ ကူးပြောင်းသည်ကို အစွဲပြုကာ 'တာကူး' ဟု ခေါ်ရာတွင်မှ တန်ခူးဟု ရွေ့လျားလာခဲ့သည်ဟု ဆိုသည်။ ဤလတွင် ရက်ပေါင်း ၂၉ ရက်ရှိပေရာ တန်ခူးရက်မစုံဟု မှတ်သားရသည်။ နာရီအားဖြင့် နေ့ညနာရီတူညီပြီး နေ့တာညတာ တူမျှသောလဖြစ်သည်။ တန်ခူးလတွင် စိတြနက္ခက်နှင့် လမင်းတို့ယှဉ်၍ အာသာဝတီနက္ခတ်နှင့် နေမင်းတို့ ယှဉ်ကြသည်။
Posted by Philip Shield at 1:30 PM No comments:
စိတ်နေစိတ်ထား မှန်မှ ဥပုသ်ရပါတယ်
အရှင်ဆန္ဒာဓိက (ရွှေပါရမီတောရ )
Posted by Philip Shield at 3:40 PM No comments:
FREE IELTS Listing Practices
In order to practice you are going to need samples of IELTS Listening test, which can be found on the following internet sites (good quality, free of charge):
1) http://elc.polyu.edu.hk/IELTS/ - take it online, or print the booklet
2) http://www.esl-lab.com/ - for this one you will need Real Audio Player
3) http://www.international.holmesglen.vic.edu.au/ie_list.cfm - download the sample, print booklet
Play the Listening samples and start using the tips while searching for answers. This is the only way to really understand how these tips work. You may have to play the same Listening file more than once, to practice in different techniques.
Posted by Philip Shield at 8:37 PM 1 comment:
စေတနာကောင်းကောင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံကျွေး လိုက်ရလို့ဝမ်းသာတယ်ဆိုရင် သူစားနိုင်သလောက် စားတာကိုလည်းကြေနပ်နိုင်ပါစေ။
“မမှားသောရှေ့နေ၊မသေသောဆေးသမားတဲ့” ဒီဖြေဆေးဟာဆေးယဉ် သွားရင်ရောဂါကျွမ်း တတ်တယ်။
“ဘေး” ကိုကြည့်လွန်းရင် “ဘေး” တွေ့တတ်တယ်။ လုပ်သင့်တာကိုမလုပ်မိရင်၊ မလုပ်သင့်တာတွေလုပ်မိနေတတ်တယ်။
ကိုယ့်စကားကိုသူနားထောင်စေချင်ရင်သူ့စကား ကိုအရင်သေသေချာချာနားထောင်ပေးလိုက် ပါဦး။
အားနည်းချက်ကိုကြည့်ပြီးစိတ်ပျက်တတ်သလို အားသာချက်ကြောင့်လည်းအထင်ကြီး တတ်တယ်။
တဖက်စွန်းရောက်ရင်ဘယ်ဟာမှမကောင်းဘူး။ မကောင်းတာကိုကြောက်ပြီးမကောင်းလုပ်သူကိုသနားလိုက်စမ်းပါ။
မကောင်းတဲ့သူကိုစိတ်ဆိုး လိုက်တာနဲ့ ကိုယ်ပါသနားစရာသတ္တ၀ါစာရင်းဝင်သွားပြီ။ အရွယ်ချင်းမတူရင်၊ နေရာချင်းမတူရင်၊ အဖြစ်ချင်းမတူရင်၊ အသိချင်းမတူနိုင်ပါဘူး။ ဒါလေးတော့ နားလည်သင့်တာပေါ့။
စိတ်တူကိုယ်တူဖြစ်နိုင်တဲ့ထုံးစံမရှိပေမယ့် ဖြစ်အောင်တော့နေကြရမှာပဲ။ အဲဒါမှအရည်အချင်း။
မင်းလိုပဲ, သူတို့ပြောတာသာအဟုတ်၊ သူတို့လုပ်တာသာအမှန်၊ သူတို့ကြံတာသာအကောင်း ထင်နေကြတယ်။ မင်းလိုပါပဲ။ ပညာဆိုတာကောင်းပါတယ်။ ပညာရှိချင်တာလား၊ ပညာပြချင်တာလား၊ နည်းနည်းတော့ သတိထားပါဦး။
ငယ်ငယ်တုန်းကထမင်းကိုဝါးပြီးခွံ့ခဲ့တာကောင်းပေမယ့် ကြီးလာတဲ့အခါ အံဖတ်တွေထင် တတ်တယ်။
ဟင်းဆိုတာထမင်းပန်းကန်ထဲထည့်စားရပေမယ့် ဟင်းပန်းကန်ထဲထမင်းလုံးကျသွားရင်တော့ ညစ်ပတ်တယ်လို့ထင်ကြတယ်။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသာအချစ်ဆုံးပါ။ ဒီစကားကိုမယုံရင်တစ်လောကလုံးရဲ့ အလိမ်အညာတွေကို ခံနေရပြီမှတ်။
တစ်ဆယ်က ကိုး ဖြစ်သွားတယ်။ ရှစ်က ကိုး ဖြစ်လာတယ်။ ကိုး ချင်းတူပေမယ့် မတူတာကိုသိလိုက်စမ်းပါ။
ဒါကိုပဲ ကြည့်၊ ဒါကိုပဲ စဉ်းစား၊ ဒါကိုပဲ နှစ်သက်၊ ဒါနဲ့ပဲ မွေ့လျော်ပျော်နေရင်၊ ဒါပဲဖြစ်နေ မှာပေါ့။
မကောင်းတာကိုလုပ်မည့်အစား မလုပ်ပဲနေတာက ကောင်းတယ်။ “အရိပ်လို နေပူကစောင့်” တဲ့။ သွားလိုက်စမ်းပါမြန်မြန်။ အရိပ်ကိုလဲရောက်မယ်၊ နေပူလဲမမိတော့ဘူး။ စောင့်မနေနဲ့။
ကိုယ်ကကြိုက်လို့ကောင်းတာထက် ကောင်းတာမို့လို့ကြိုက်တယ်ဆိုရင် အကောင်းဆုံးကို ရနိုင်တာပေါ့။
“စေတနာသည်လူတိုင်းနဲ့မတန်” သည်မဟုတ်။ လူတိုင်းနဲ့တန်တဲ့စေတနာမျိုးထားနိုင်ဖို့သာ လိုအပ်ပါတယ်။
ဘ၀မြင့်ရင် ဘ၀င်မြင့်တတ်တယ်။ ဘ၀ပဲမြင့်ပါစေ။
A New ButtonNow in Gmail, you can requestaphysical copy of any message with the click ofabutton, and we'll send it to you in the mail.Simplicity SquaredGoogle will print all messages instantly and prepare them for delivery. Allow 2-4 business days foraparcel to arrive via post.Total ControlA stack of Gmail Paper arrives inabox at your doorstep, and it’s yours to keep forever. You can read it, sort it, search it, touch it. Or even move it to the trash—the real trash. (Recycling is encouraged.)Keep it Secret, Keep it SafeGoogle takes privacy very seriously. But once your email is physically in your hands, it's as secure as you want to make it.
Posted by Philip Shield at 2:07 PM 1 comment:
Posted by Philip Shield at 1:45 PM No comments: